Toshiba Inotangisa FC-MAMR, Yekutanga Helium-Yakasimbiswa 18TB HDD | Linux Vakapindwa muropa
Toshiba ajoina kirabhu yevanogadzira dhiraivhi vanoshandisa Microwave Inobatsira Magnetic Kurekodha (MAMR) tekinoroji, se Svondo rapfuura yakaunza iyo yekutanga dhiraidhi dhizaini ine microwave-yakabatsira magineti ekurekodha tekinoroji kuyerera kunodzorwa (FC-MAMR).
Iyo FC-MAMR iko kugadzirisa kweiyo microwave-yakabatsira magineti ekurekodha tekinoroji. Iyo nyowani MG09 yakateedzana yakaoma dhiraivha inonyanya kugadzirirwa yepedyo uye bhizinesi kunyorera, pamwe ne Ivo vanopa 18TB kugona uye Ultra-yakaderera yakamira simba rekushandisa.
MG09 akateedzana yakavakirwa pachizvarwa chechitatu cheToshiba helium-yakasimbiswa discs, ichibvumira iyo OEM kuwedzera iyo Yakajairwa Magnetic Kurekodha (CMR) kuwanda kune 2TB padhisiki.
Toshiba akaisa pamwechete 9 ndiro padhiraivho yakaoma panguva ino yehuwandu hwehuwandu hwe18 TB. Iwo matsva anodhiraivha akaunzwa mune akajairwa 3,5-inch fomati.
Zvinoenderana nekambani, fomati iyi inopa kuita kwe7200 rpm uye inoshanduka nyore nyore kune yekuchengetedza gore zvivakwa, yakakosha dhata yekuchengetedza uye maseva, uye faira uye chinhu chekuchengetedza mhinduro.
Toshiba akati 18TB CMR inokwanisa kupihwa kuburikidza nehunyanzvi hwayo Kuyerera kweMicrowave Inobatsira Magnetic Kurekodha (FC-MAMR) tekinoroji.
"Aya mafambiro mberi anobatsira MG09 nhepfenyuro kuwana kugona kwakaringana kugona uye kuenderana kwekushandisa, ine yakaenzana data kuvimbika," kambani yakadaro.
Dhiraivhu dzakaomarara dzinogadzirwa naShowa Denko KK (SDK), mumwe wenguva yakareba Toshiba mudiwa. Imwe neimwe aluminium tireyi inenge 0,635mm gobvu, huwandu hweasal hweanenge 1,5 TB / inch uye inogona kuchengeta kusvika ku2 TB yedata.
MG09 akateedzana inosanganisirawo 16TB modhi iyo inogona kunge iine mashoma emateyi. Iwo madhiraivha akaomarara ane 512MB buffer memory uye akagadzirirwa huwandu hwakanyanya hwesimba rekuchinjisa dhata re281MB / s.
Zvisinei, Toshiba haana kuvandudza kuita kwese kuita yezvigadzirwa zvitsva izvi, kunyangwe yavo IOPS paTB inoshanda ingangove yakaderera pane avo vakavatangira. Iyo inogadzira ichapa madhiraivha ayo matsva neSATA 3.3 (6 Gb / s) uye SAS 3.0 (12 Gb / s) maficha, pamwe nesarudzo ine musoro dhata rekuvhara urefu.
Chimwe chezvinhu zvikuru yeiyo FC-MAMR MG09 akateedzana akaomarara anotyaira ndiko kushandisa kwako simba. Zvinoenderana nekambani, mune inoshanda yekumira mode, shandisa 4.16 / 4.54 W (SATA / SAS modhi), iri diki kwazvo kupfuura Seagate 'Exos X18' uye 'Ultrastar DC HC550' Western Dhijitari mamodheru.
Kana zvasvika pakusashanda kwesimba kwesimba rekushandisa (makuru madhiraivha akaoma anogona kuita idle kwenguva yakareba), iyo 09TB MG18 yakawana rekodhi kuita sekureva kwaToshiba kuti inongoshandisa 0.23 W / TB (mune iyo shanduro yeSATA).
Zvichakadaro, iwo mauniti matsva akayerwa pa8,35 / 8,74 W. (SATA / SAS SKU) panguva yekuverenga / kunyora mashandiro, ayo ari pamusoro pe "DC HC550" pamwe neyekutangira MG07 neMG08 dzakateedzana.
Nekuti iyo MG09 hard drive nhevedzano yakagadzirirwa dhata repakati racks iyo inogara mazana emadhiraivhu akaomarara madhiraivha, inoratidzira akawanda ekuwedzera kuti ave nechokwadi chisingachinjike mashandiro, kuvimbika, uye kusimba. Kazhinji izvi zvinokwidziridzwa zvinosanganisira zvepamusoro uye zvepasi zvakamisikidzwa mota, RVFF (Rotation Vibration Feed Pamberi) maseru, pamwe neyakajairwa maseru.
Kufanana neyese yazvino mayuniti e24 / 7 sevhisi, Toshiba MG09 akateedzana akateedzera akagadzirirwa wepakati pagore basa rekutakura re550TB, MTBF yemaawa emamiriyoni maviri nezviuru uye yakafukidzwa neyakajairwa-makore mashanu garandi.
Uye zvakare, iyo nyowani MG09 yakaoma dhiraivha inowirirana nePersistent Nyora cache cache (PWC) kubva kuToshiba uye inoratidzira Power Loss Dziviriro (PLP). Kudzivirirwa pakurasikirwa kwesimba kwakakosha kune 4K chikamu chinotyaira izvo zvinoteedzera 512B zvikamu.
Iyo PWC ine iyo PLP basa inodzivirira data mune simba kurasikirwa kana uchiita kuverenga-kugadzirisa-kunyora (RMW) mashandiro. Izvi zvinonongedza chikumbiro kunyora chinyorwa pamwe nezvikamu zvepanyama izvo zvaunoda kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Toshiba Inotangisa FC-MAMR, Yekutanga Helium-Yakasimbiswa 18TB HDD
Iko hakuna kesi, kana iwe uchida kuchengetedza, kuti uenderere mberi kubheja pama mechanical discs ..